Kansarka Sambabka: Cabitaanka shaaha ama qaxwaha badani waxay kordhinaysaa khatarta - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Kansarka Sambabka: Cabitaanka shaaha ama qaxwada badani waxay kordhisaa halista
a daraasad dhowaan led by Ardayda Mareykanka ee Jaamacadda Vanderbilt (Tennessee) oo ay soo bandhigeen shir sannadeedkii Ururka Maraykanka ee Baaritaanka Kansarka, ayaa qiray in cabitaanka in ka badan laba koob oo kafee ah ama shaaha maalin kasta ay kordhiyaan halista kansarka sanbabada.
Tubaakada, waa arrin sii xumaaneysa
Waxay diyaariyeen oo ay wax ka baranayeen daraasadaha 17 ee lagu sameeyey malaayiin 1,2 dadka ka yimid Mareykanka iyo Aasiya. Muddo ka badan celceliska sanadaha 8,6, dad ka badan 20 500 waxay sameeyeen kansarka sanbabada, kala badhkii oo aan sigaar cabbin. Statistically, sida laga soo xigtay ardayda, dadka sigaarka cabba ee cabbaya laba ama kabadan oo cabitaan ah maalintii waxay joogaan 41% ay u badan tahay inay qabaan kansarka sanbabada marka la barbar dhigo kuwa aan haysan. Khatartu waxay sii kordheysaa 15% haddii qaxwada la caddeeyo. Dadka sigaarka cabba oo cabaya laba koob (ama in ka badan) shaaha maalintii waxay kordhinayaan khatarta 37%.
Cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in aysan ahayn kafeyn oo ah asalka rootiga horumarinta kansarka sanbabada, laakiin marxaladda geedi socodka dabka. Jingjing Zhu, oo ah qoraaga hogaamiya daraasadda, ayaa sheegay, in kani kaliya yahay daraasad indho-indhayn ah. Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo abuuro xiriir xiriir ah. Dr. Julie Fisher, oo ah cilmi nafsi ku takhasusay cilmiga kansarka ee Levine Cancer in North Carolina, oo aan ka mid ahayn daraasadda, ayaa sheegay in natiijadu ay tahay "xiiso leh" oo "ku qasban", laakiin waxay dareensan tahay in wax natiijo ah la qaadan saldhigaan.
Faransiiska iyo qaxwaha
Sida laga soo xigtay hal sahan Ifop / C10 sii daayay Bishii Oktoobar 2018, 83% dadka Faransiisku waxay cunaan qaxwo (88% ragga iyo 79% haweenka). Waxay yihiin 62% inay liqaan xilliga quraacda, 76 boqolkiiba goobtooda shaqada iyo 40% makhaayadda. Inta badan sanadaha 50 ayaa ah kuwa ugu jecel tan iyo markii ay 92% cabbaan.
Miyaad xiiseyneysaa mawduucan? Kaalay oo ka hadal tartankayaga!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/28821-Cancer-poumon-boire-the-de-cafe-augmenterait-risque